Soosaaraha Daaqadda Siideeya ee ugu Wanaagsan | Medo
MDTC152A daaqada kalabaxa
Naqshad cusub ayaa ka dhigaysa meel bannaan! Dadka jecel daaqada siibada u maleynayaa inay ku habboon tahay, waxay bixisaa aragti fiican iyo hawo weyn, iyo wuxuu badbaadiyaa booska. Kuwa aan jeclayn waxay u maleynayaan inay ku liidato shaabadaynta iyo waxqabadka iska caabinta dabaysha Halka naqshadeeyaha MEDO uu kor u qaaday kor ku xusan oo wax laga beddelay qasaarooyinka si loo sameeyo MDTC152A slimline sliding daaqad
Semi nidaamka qufulka otomaatiga ah
Semi toos ah uxiran
Nidaamka qufulka otomaatiga ah ee tooska ah iyo biririfta birta ilaaliyaha gaarka ah iyada oo loo marayo habka qufulka daaqada sibidhka ah.
Mesh duulimaad aan la arki karin, naqshad caato ah
Mesh duulimaad qarsoon Qaab dhismeedka isku xidhka muraayadda hal-abuurka leh naqshad Xirmada qarsoon, isdhexgalka super cidhiidhi ah Casri ah oo hagaagsan eeg Muuqaal muuqaal ah.
Naqshadeynta bini'aadamka, shaqeynta lidka lidka ku ah
Rullaluistemadka lulid lidka ah hagaajin karo
Raaxo leh kuna raaxeyso ku tiirsanaanta gacanta markii aad daawaneysid muuqaal. Rullaluistemadka lidka lidka-lisid ee la hagaajin karo waxay ka dhigaysaa qulqulka xasiloonida badan iyo siman.
Xirmada qarsoon waxay bixisaa aragti dusha sare ah. Ka-hortagga boodhka iyo cayayaanka caddayn qarinaysa duulaanka ayaa badiyaa badbaadin kara dadaallada nadiifinta.
Noocyada Waxqabadka Badan Si Loogu Kordhiyo Qiimaha Macaamiisha
MEDO waxay leedahay ikhtiyaarro badan oo muuqaal ah oo caawimaad leh si loogu daro howlo badan daaqadaha iyo albaabada, si loo daboolo baahiyaha macaamiisha kala duwan. Waxaa intaa dheer, MEDO waxay leedahay koox xoog badan oo R&D ah si loo habeeyo xalka shaqooyinka gaarka ah ee mashruuca.
Qaab cidhiidhi ah oo ku jira naqshadda caatada ah:
Maadaama dadka casriga ahi door bidaan daaqadaha iyo albaabada cabbiro waaweyn oo aragti fiican leh iyo nalal
Nidaamyada caatada ah ee 'MEDO' oo dhuuban looxyada ayaa si fiican u qanciya baahidan.
Qalab tayo sare leh:
Dammaanad 10-sano ah oo loogu talagalay qalabka, taas oo ah heerka ugu sareeya ee warshadaha.
Qalabka sumadda Medo, sumadda Jarmalka qalabka iyo qalabka sumadda Mareykanka waa la heli karo
Noocyo kala duwan oo wax laga qabto ayaa la heli karaa.
Adeegga Customization waa la soo dhaweynayaa.
Goomayaashayadu waxay ka samaysan yihiin qiimo cayiman oo dibadda laga keeno alaabta ceeriin ee waxqabadka wanaagsan ee shaabadaynta, iska caabinta cimilada iyo caddaynta gabowga.
Adeeg Hal-Joog ah iyo Bixiyaha Xalka Farsamada
MEDO waxay bixisaa adeeg hal-joogsi ah oo leh xalalka ugu fiican si loo daboolo dhacdooyin kala duwan iyo baahiyaha macmiilka. Iyada oo saldhig u ah wax soo saarka ee Foshan Shiinaha, MEDO wuxuu ku raaxeeyaa faa'iidooyinka isbeddelka warshadaha, silsiladda saadka, qiimaha iyo gaadiidka iwm.
Hore: Slim Sift & Slide Nidaamka
Xiga: Nidaamka Slimline Sliding